Wadarta guud ee gawaarida iswada ee kujira magaca Apple waxay gaarayaan 55 cutub | Wararka IPhone
Kulligeen waan iska cadnahay in Apple ay gacanta ku hayso nidaam wadis madax-bannaan oo ay sii waddo hagaajinta iyo hagaajinta waddada. Tani waxay suurtogal u tahay baabuurta leh cutubyadan ku diiwaangashan magacooda iyo bilaha. ayaa korodhay ilaa 55 gaari.
Shaki la'aan tani waxay naga dhigeysaa inaan u maleyno in Apple uu si dhab ah u qaadanayo mashruuca iyo haddii ay dhacdo qof kasta oo weydiiyo, Looma sharciyeyn gawaarida inay kursiga darawalka bilaash ku noqdaan, xaaladdan oo kale waa rukhsadda aasaasiga ah ee ka dhex jirta baabuurta iskeed u madax bannaan tanina macnaheedu waa inay ku qaadaan darawal kursiga giraangirta.
Toban baabuur oo dheeri ah tan iyo bilowgii sanadka
Bilowgii sanadka 2018, Apple waxay diiwaangashanayd 45 gaari. Sida laga soo xigtay Waaxda Gawaarida ee Kalifoorniya, hadda isla hay'addan ayaa sheegaysa in tirada gawaarida ay diiwaan geliyeen wiilasha Cupertino ay kor u dhaafayaan 55 iyadoo sidoo kale lagu daray 83 darawal.
Qodob kale oo aan horeyba ugu cadeynay waqtigan ayaa ah in Apple aysan dooneynin inay si buuxda u gasho goobta gawaarida iyadoo la abuurayo baabuur u gaar ah, waxa ay ka doonayaan Apple waa inay soo saaraan barnaamij ay heli karaan soo saarayaasha oo u ogolaanaya in loo isticmaalo gaari kasta oo la sameeyo ama lagu daydo. Sidoo kale way fiicnaan lahayd haddii ay wax yar ka sii wada shaqeeyaan Apple CarPlay, laakiin tani waa arrin ka soo baxaysa waxa baabuurta iswada ay yihiin iyo barnaamijyada lagama maarmaanka u ah iyaga, taas oo si sax ah u ah waxa Apple horumarin lahayd dhowr bilood oo leh dhowr baabuur iyada oo loo marayo waddooyinka California.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tirada guud ee gawaarida iswada ee ku jira magaca Apple waxay gaarayaan 55 cutub